Etu ịhazi oge tweets na Twitter - [Tutorial 2018] | ECommerce ozi ọma
Ka ọ dị ugbu a, netwọ mmekọrịta na-adị oke mkpa maka nkwalite ngwaahịa, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-anọ ụbọchị ahụ netwọk mmekọrịta, eme site na mgbe ha tetara na ruo mgbe ha ga-ehi ụra, ọ bụ ya mere o ji dị mma na-amụta jikwaa twitter na ịtọọ oge tweets.
Mgbe ị bụ kpakpando ma ọ bụ ụlọ ọrụ ama ama, ị nwere otu ndị ọrụ ahaziri maka njikwa netwọkụ, raara onwe ha nye maka ijikwa ihe niile metụtara ha ma debe ha ka emelitere, ịmara ihe niile edepụtara
Mana maka ndị ọrụ ndị ọzọ, nke a nwere ike ibute nsogbu mgbe ụfọdụ ma ọ bụ nsogbu, ebe ọ bụrụ na ha chọrọ ibipụta ihe na netwọkụ mmekọrịta ha (twitter n'okwu a), ha ga-amata iji mee ya n'onwe ha n'ụzọ. .
1 Etu esi hazie tweets?
1.4 Site na Excel
2 Site na Twitter
2.1 Jikwaa tweets ndokwa gị
2.2 Lelee tweets ndokwa
Etu esi hazie tweets?
A ga-egosi gị n'okpuru ọtụtụ ụzọ ị nwere ike iji ịtọọ oge tweets gị ma bipụta ha na akpaghị aka n'oge na ebe ịchọrọ ma ọ bụ chọrọ na enweghị njikọ.
Ihe ikpo okwu a, nwere usoro nke ya ịhazi usoro tweets ruo oge ụfọdụ ugbu a n'ihi na ha na-bipụtara na a ụfọdụ oge, ma ọ bụ ka a bit siri ike n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ka na chọrọ ụfọdụ chọrọ ka a zutere, dị ka inwe a Akaụntụ mgbasa ozi na Twitter.
Nke a bụ ihe kpatara na ewepu usoro nke netwọkụ mmekọrịta, anyị ga-egosi gị ngwa nke ahụ ga-enye onye ọ bụla ohere ime nke a na n'ụzọ dị mfe karị.
Ọ bụ ngwa ọrụ zuru oke ma enwere ike ịsị na ọ na - enye ngwakọta ọrụ n'etiti Hootsuite na Buffer ụzọ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ na-enye ụzọ abụọ iji hazie tweets gị ka mbipụta ha na-akpaghị aka ga-ekwe omume, nke nwere ike ịbụ na ụbọchị na oge maka ụbọchị ọ bụla tweet, dị ka Hootsuite na-eme, ma ọ bụ na usoro nke usoro nhazi, nke bụ ụzọ nke Buffer na-arụ ọrụ.
Ọ na-enye ohere na-ebipụta ihe oyiyi na naanị tinye adreesị weebụ nke faịlụ anyị chọrọ tweet na ihe oyiyi ahụ ga-adị ka tweets sitere na Twitter, enweghị njikọ.
Ọ kwesịkwara kwuru na ọ na-enye ohere nke na-ekwusakwa otu tweet na abụọ dị iche iche ihe ndekọ.
Ngwaọrụ ọzọ maka ịhazi usoro tweets nke ahụ na-enye gị ohere ịme ka ebipụta ha na akpaghị aka n ’ịnọghị n’ihu kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị gị.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịtọzi tweets n'oge anyị chọrọ ma chefuo ihe ndị ọzọ.
Ihe ị ga-eburu n'uche bụ na ọ na-enye ohere ibugo ihe oyiyi site na mgbati maka Chrome, ọ na-enyekwa ohere mbipụta na LinkedIn na Google+.
Nke a bụ ngwa kachasị ewu ewu, jiri ngwa a ị nwere ike biputere na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche. Site Hootsuite ị nwere ike - hazie oge ị chọrọ ka ebipụta tweet ọ bụla, Ha ga-ebipụta na-akpaghị aka oge ị mechara ịkọwa ntọala.
Site na Excel
Ọ bụrụ n'ịchọghị ịdabere na ngwa iji hazie oge tweets mana ị ka chọrọ ka ebipụta ya na akpaghị aka, enwere usoro ọzọ site na mpempe akwụkwọ.
Tupu ịme ihe ọ bụla, ị ga-aga na ibe weebụ Twitter API ma debanye aha ngwa na akaụntụ Twitter gị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ebute gị gaa na peeji nke ebe ị ga-abanye ụfọdụ data ma mesịa pịa nhọrọ «Mepụta ngwa Twitter gị».
Ná ngwụsị nke usoro a niile, ọ ga-akpọrọ gị gaa na peeji nke ngwa Twitter na nke ahụ bụ ebe ị ga-aga na ngalaba Igodo na Acces Tokens o Igodo na ohere tokens na detuo Key Consumer na Consumer Secret na nchekwa iji gafere ha ma emesịa na Excel ọrụ.
Ná ngwụsị nke usoro a niile, ị nwere ike mepee Excel nke e depụtaghachiri na Google Drive ma ọ ga-anọ ebe ị ga-ahụ taabụ atọ na ala, Ihe, Ntọala na Twitter. Anyị na-ahọrọ Ntọala 32
Ozugbo ị nọ na nkebi a, ị ga-abanye ndị ahịa na igodo nzuzo nke ị depụtaghachiri.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-aga menu elu nke akwụkwọ ntanetị iji pịa nhọrọ ahụ Onye nhazi, wee pịa na nhọrọ Kwenye edemede nke mere na n'ụzọ a, mpempe akwụkwọ ntanetị nwere ike ịtọzi tweets.
Na-esote, windo ga-apụta nke ga-arịọ gị ka ịnabata ikikere ka mpempe akwụkwọ ahụ wee nwee ike ịnweta data gị na Google.
Ihe fọdụ bụ ịchọpụta ma ihe niile adịla njikere wee lelee na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, maka nke a, ị ga-aga na taabụ Twitter ma dee tweets site na ide ha na kọlụm content (ọdịnaya), na kọlụm Ugbua (ogologo) ị ga-ahụ nha nke tweets. Na nkebi Bipụta Datebọchị (mbipụta ụbọchị) ị ga-ezipụta ụbọchị ị chọrọ ebipụta.
Obodo ahụ URL ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye njikọ na tweet na NJ Google Media bụ ebe ị ga-etinye NJ mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ihe oyiyi ọ bụla, gif ma ọ bụ vidiyo site na Google Drive.
Mgbe ị na-ejupụta mpaghara niile ịchọrọ, gaa na menu Ịtọ oge wee pịa Malite Nhazi ịmalite posts.
Mgbasa ozi Twitter ọ bụ ngwaọrụ nke ahụ ga - enyere gị aka ịhazi oge tweet na ndị ahụ bụ nanị maka nkwalite, n'ụzọ ha ga-egosi na "ebipụtara" na ụbọchị na oge a kapịrị ọnụ.
Na akaụntụ mgbasa ozi gị ị nwere ike ịtọọ oge tweet ka ebipụtara ọbụna otu afọ n'ọdịnihu, na mgbakwunye na ịgbakwunye ha na mkpọsa ọhụrụ na nke dị. Typedị njirimara a dị mma ma zuru oke maka tweets ndị ọ dị mkpa ka edee na ngwụsị izu, n'abalị, ma ọ bụ n'oge ọrụ siri ike mgbe ọ na-esi ike itinye aka.
Banye na akaụntụ Twitter gị. Iji mee nke a, gaa na twitter.com.
Mgbe ị banyelarị na ntụzịaka ahụ, gaa na taabụ "Okike" <"Tweets".
Pịa na bọtịnụ "New Tweet" n'akụkụ aka nri elu.
Nke a ga-akpaghị aka kpọgara gị na peeji nke "Okike nke Tweets", ebe ị nwere ike ịmepụta tweet gị, na-agbakwunye ederede, onyonyo, vidiyo na Kaadị ịchọrọ.
Will ga-ahọrọ ma ọ bụ kpọtụrụ igbe ebe ọ na-ekwu "Nanị maka nkwalite".
Site na ịhọrọ igbe ahụ e kwuru na mbụ, a ga-ahụ naanị tweet gị ma ọ bụ gosi ndị ọrụ ejiri lekwasịrị anya na mgbasa ozi tweets na-akwalite, mana a gaghị egosiputa ndị na-eso ụzọ gị niile.
Iji hazie oge tweet, ị ga-enyocha igbe ahụ.
Otu ihe dị oke mkpa nke ị ga-eburu n’uche bụ nke ahụ i nwere ike na deselect igbe Nanị maka nkwalite ọ bụrụ na i wee banye na ya @ Aha ojii site na akaụntụ ad.
Ozugbo i mechara ihe ederede, ị ga - enwe ike ịhọrọ bọtịnụ akụ ala n’akụkụ bọtịnụ “Tweet”.
Họrọ “dutọ oge” site na ndọpụta menu.
Họrọ ụbọchị na oge ịchọrọ biputere tweet gị.
A ghaghi ihu ntaneti i doziri na netwọkụ mmekọrịta gị ma ọ bụ na ntanetị data ọ bụla ruo mgbe ezutere ụbọchị na oge.
Jikwaa tweets ndokwa gị
Banye na akaụntụ Twitter gị.
Mgbe ị na-abanye, ị ga-aga ngalaba ahụ Njikwa mgbasa ozi, pịa taabụ Mmepụta <Tweets. Nke a bụ ebe ị nwere ike ịhụ ma mepụta naanị tweets maka nkwalite, ndokwa, organic ma ọ bụ Tweets ọ bụla ọzọ sitere na mkpọsa gị.
Lelee tweets ndokwa
Iji lelee tweets niile ndokwa gị, họrọ bọtịnụ ndọpụta «Nanị tweets maka nkwalite»Ma dochie ya«Ezubere Tweets".
Na nke ahụ ị ga-enwe ike ịhụ ihe niile edere edere tinyere nhọrọ niile maka ijikwa tweets ndokwa
Pịa bọtịnụ «Dezie»Emi odude ke nnasia nke ibe, wee dezie ọdịnaya ịchọrọ na tweet na nkọwa nke mbipụta ya, nkwalite ma ọ bụ mmemme. Na njedebe ịchekwa mgbanwe naanị ị ga - pịa bọtịnụ «Melite ndokwa Tweet»
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ọ ga-ekwe omume ihichapụ tweets ndokwa Iji mee nke a, họrọ igbe dị n'akụkụ tweet na-eme atụmatụ wee pịa bọtịnụ «.Hichapụ nhọrọ»Emi odude ke nnasia aka nri nke ndepụta Tweets.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Etu esi hazie tweets efu na Twitter